Xog Laga Helayo Khasaaraha Ka Dhashay Weeraro Ka Dhacay Deegano Dhaca Konfurta Somalia. – Bogga Calamada.com
Xog Laga Helayo Khasaaraha Ka Dhashay Weeraro Ka Dhacay Deegano Dhaca Konfurta Somalia.
Faafaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa kamiin ciidamada Mujaahidiinta u dhigeen maleeshiyaadka Murtadiinta kooxda Axmed Madoobe oo ka dhacay duleedka magaalada Dhoobley ee gobalka Jubbada Hoose kaasi oo lagu dilay Sideed askari oo Murtadiin ah.
Warar ay heshay Idaacada Islaamiga Andalus ayaa sheegaya in sideedii Murtad ee kamiinkaas lagu dilay uu ka mid ahaa sarkal ka tirsan saraakiisha kooxda Ridada Soomaaliya islamarkana mudooyinka dambe howl asha haado la diriirnimo ka waday deegaanada tirade yare ee cadowga kaga sugan yihiin Wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka.
Sarkaalka baqtiyay ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdi Fitaax Jeeni hote. Wuxuuna ahaa taliyihii hogaaminaayay maleeshiyaadkii lagu beegsaday inta u dhaxeeysa degmada Dhoobley iyo deegaanka Dag allaamo.
Sarkalkan ayaa dhawaan laga soo diray magaalada Muqdisho si uu garab u siiyo maleeshiyaadka Murtadiinta ee la daala dhacaya weerarda kaga imaanaya dhanka ciidanka Mujaahidiinta.
Maydka Cabdi fataax iyo todobo maleeshiyaadkii Murtadiinta ee uu hogaaminayay ayaa looga tagay naxwaaxiga deegaanka dag allaamo oo ah halkii lagu dagaalamay iyadoona Mujaahidiinta ay dhamaan qaniimaysteen hubkii ay wateen.
Dhinaca kale ciidamada Mujaahidiinta ee ka howlgala magaalada Caasimada ah ee Muqdisho ayaa qarax la beegsaday taliye kuxigeenkii maleeshiyaadka asha haado la diriirka kooxda Ridada Soomaaliya ugu magacaaban degmada Waabari ee gobalka Banaadir.
Murtadkan ayaa dhaawac ku noqday qaraxaasi kadib markii ciidamada Mujaahidiinta ay qarax la eegteen gaariga ninkan oo maraayay halka ay iska galaan degmooyinka waabari iyo xamar jajab ee magaalada muqdisho.
Maleeshiyaad murtadiin ah oo soo gaaray goobtii qaraxa uu ka dhacay ayaa dhaawaca sarkalka murtadka ah qaaday iyagoona ula cararay isbitaalada muqdisho.